Madheshvani : The voice of Madhesh - ‘हामी दृढ संकल्पित छौं, आगामी निर्वाचनमा प्रदेश २ मा क्लिनस्वीप गर्नेछौं’
‘हामी दृढ संकल्पित छौं, आगामी निर्वाचनमा प्रदेश २ मा क्लिनस्वीप गर्नेछौं’
ललित मल्लिक सानु, संयोजक, मधेश नेतृत्व पुञ्ज, जनमत पार्टी
० तपाइँ जनमत पार्टीमा किन लाग्नुभयो ?
— मधेशको मुक्ति चाहनाका साथ म फोरममा आबद्ध भई आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरें । फोरम निरन्तररुपमा विभाजित हुँदै गयो तर म सधैं फोरमसँगै रहें । जब जयप्रकाश गुप्ताजीको नेतृत्वमा फोरम विभाजित भयो र गणतान्त्रिक फोरम बन्यो त्यो बेला म जेपी गुप्ताजीको राजनीतिक विचारप्रति प्रभावित हुँदै आएको थिएँ र उहाँसँगै लागे । त्यसपछि उहाँले तराई मधेश राष्ट्रिय अभियान स्थापना गर्नुभयो र हामी लगायतका नेता कार्यकर्ताहरु अभियानमै लाग्यौं । केही दिनपछि तमरा अभियान सुस्त भयो । अन्य साथीहरु पनि अभियानबाट टाढिँदै गए । म सधैं मधेशको लागि संघर्ष गर्ने व्यक्ति भएकोले सुस्त संगठनमा बसेर आफ्नो संघर्षलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै वर्तमान अवस्थामा सबभन्दा सशक्तरुपमा मधेशको मुद्दा उठाउँदै आएको डा.सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीमा लागेको हुँ । जनमत पार्टी नयाँ जोश र जाँगरका साथ मधेश मुक्तिका लागि लागिरहेको युवाहरुको पार्टी भएकोले म जनमत पार्टीमा आबद्ध हुन पुगें ।
० जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउतले विगतमा पृथकवादी एजेन्डा बोकेका थिए, उहाँलाई कसरी विश्वास गर्नुभयो ?
— जनमत पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ कि हामीले जनमत संग्रहको माध्यमले जनताले राखेको आकांक्षा पूरा गराउने छौं । विगतमा डा.सीके राउतले उठाउनुभएको मुद्दालाई नै पुरस्कृत ढंगले अगाडि बढिरहेका छौं । हाम्रो मुद्दाहरु स्पष्ट छ, जनताले जुन जनादेश दिन्छ त्यसअनुसार अगाडि बढ्छौं ।
० तर, डा.सीके राउतमाथि विभिन्न आरोपहरु लगाउँदै प्रभावशाली नेताहरुले पार्टी परित्याग गरेका छन् नि ?
— केही व्यक्तिहरुले डा.सीके राउतमाथि विभिन्न आरोपहरु लगाउँदै जनमत पार्टीबाट अलग भए । छुट्टिन चाहने व्यक्तिलाई घेराबन्दी गरेर राख्न सकिँदैन । छुट्टिने व्यक्तिहरुले आफ्ना तर्कलाई जायज ठहराउन विभिन्न आरोपहरु लगाउने गर्छन् । उहाँहरुले लगाउनुभएको आरोप आफैमा भ्रामक हो । कसैमाथि आरोप लगाउनुभन्दा पहिला उहाँहरुले आफ्नो विगतका क्रियाकलापलाई नियाल्नुपर्दछ । संगठनमा आबद्ध हुने र अलग हुने प्रक्रियाहरु चलि नै रहन्छन् । संगठनमा सामूहिक निर्णय हुन्छ, केन्द्रीय समितिले आगामी नीति र योजनाहरु बनाउँछ । पार्टीबाट अलग हुने साथीहरुले नै गर्नुभएको निर्णयको कार्यादेशको आधारमा जनमत पार्टी अगाडि बढिरहेको छ । तर अहिले आएर अध्यक्ष डा.सीके राउतमाथि तानाशाही भनेर आरोप लगाउनु हुन्छ भने त्यसमा कुनै सत्यता छैन ।
० डा.राउतले तानाशाही र एकलौटीरुपमा पार्टी सञ्चालन गर्नुहुन्छ नि ?
— पार्टी परित्याग गरेर गएका नेताहरुमध्ये कतिपय पार्टीका प्रमुख नेता हुनुहुन्थ्यो । पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका कैलाश महतो तत्कालीन स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका दोस्रो वरियताका नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले तानाशाहीको आरोप लगाउन मिलेन । यदि डा.सीके राउत तानाशाही भएको भए महतोलाई सहसंयोजक बनाउने थिएन । उहाँहरुको यस्तो आरोपलाई जनताले पनि पत्याएका छैनन् । उहाँहरु पार्टीलाई बदनाम गर्ने नियतले कुनै शक्तिबाट परिचालित हुनुहुन्छ ।
० कुनै पनि निर्णय गर्दा उहाँले पार्टीभित्र छलफल गर्नुहुन्न, उहाँले फरमान मात्रै जारी गर्नुहुन्छ । जसलाई सबैले मान्नुपर्छ भन्छन् नि ?
— संगठनको कुनै निर्णय बिना नै डा.सीके राउतले पार्टीको घोषणा गर्नुभयो भन्ने आरोप पनि लगाउनुभयो । तर, नेपाल सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौतापश्चात् डा.सीके राउत मधेश झर्नुभयो र लहानमा बैठक बोलाउनुभयो । सो बैठकमा गठबन्धनलाई पार्टीको रुपमा रुपान्तरण गर्ने सबैसँग छलफल गरेर निर्णय गर्नुभएको थियो । पार्टी निर्माण गर्ने विषयमा दुई दिनसम्म सिरहाको लहानमा छलफल भएको हो । पार्टी घोषणा पछि पनि तीन वटा बैठक बसेको छ । त्यो बैठकमा कैलाश महतो लगायतका साथीहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो । म आफै जनमत पार्टीमा प्रवेश गर्दा केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको हो । त्यसैले डा.सीके राउतमाथि आरोप लगाउनु सरासर गलत हो । जनमत पार्टीले कुनै पनि निर्णय सार्वजनिक गर्दा केन्द्रीय समितिमा छलफल भएर निर्णय गर्ने गरिएको छ । यो कोरोना कालमा पनि जुममार्फत् बैठक बस्यो । हरेक विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुन्छ । त्यसैले कसैले आरोप लगाउँछन् कि कुनै पनि निर्णय गर्दा पार्टीभित्र छलफल हुँदैन त्यो सरासर गलत हो ।
० तर, डा.राउतबाहेक जनमत पार्टीमा अन्य नेता नै छैन्, उहाँले आफूलाई वन म्यान आर्मीको रुपमा प्रस्ताव गर्नुहुन्छ । उहाँले आफूलाई केन्द्रीय अध्यक्ष र बाँकीलाई सदस्य मात्र बनाउनुभएको छ, अन्य पदाधिकारीहरु किन राखिएको छैन त ?
— जनमत पार्टीमा डा.सीके राउत वन मेन आर्मीझैं हुनुहुन्छ, अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारीहरु किन छैन भन्ने खालका सवालहरु छन् । तर, हाम्रो पार्टी गठन भएको धेरै समय भएको छैन । एकै दिनमा सबै काम हुने अवस्था रहँदैन । अब छिट्टै नै जनमत पार्टीमा पदाधिकारीहरुको पनि चयन हुन्छ । कार्यक्षमता अनुसार साथीहरुलाई विभिन्न जिम्मेवारीहरु तोकिनेछ । अहिले जनमत पार्टीले विभिन्न विभागहरु निर्माण गरेको छ । त्यसैले जनमत पार्टीभित्र कार्यविभाजन भइरहेको छ । जनमत पार्टी नयाँ पार्टी हो, एकैचोटि सबै निर्णय गरिसक्ने अवस्था पनि हुँदैन । केन्द्रीय पदाधिकारी चयन गर्दा हतारमा गरेर हुँदैन । सबैको योगदान र क्षमतालाई कदर गर्दै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँले लोकतान्त्रिक विधिबाट हरेक विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर नै अगाडि बढिरहनुभएको छ ।
० तर, अन्य पदाधिकारीहरु कहिलेसम्म तोकिन्छ ?
— विभिन्न चरणमा भइरहेको केन्द्रीय समितिको बैठकले हाम्रो कार्यविभाजन हुँदै गइरहेको छ । विगतका बैठकहरुले विदेश विभाग, प्रशिक्षण विभाग, सञ्चार विभाग तोक्यो । त्यस्तै अन्य विभागहरु र कार्यविभाजनका प्रक्रिया चलिरहेको छ । साथीहरुको कार्यक्षमता र योगदानको मूल्यांकनको आधारमा गर्दै लाने कुरा हो । छिट्टै नै केन्द्रीय समितिले पदाधिकारीको टुंगो लगाउँछ ।
० आगामी निर्वाचनमा जनमत पार्टीले प्रदेश २ मा क्लिनस्वीप गर्ने दाबी गर्नुभएको छ, तर उपनिर्वाचनमा त कतिपय ठाउँमा आफ्नो जमानतसमेत बचाउन सकेन । कसरी क्लिनस्वीपको दाबी गर्नुहुन्छ ?
— उपनिर्वाचनको बेला हामी भर्खर मात्र पार्टी बनाएका थियौं । हाम्रो चुनाव चिन्हबारे पनि जनतालाई राम्ररी थाहा थिएन । विभिन्न ठाउँमा हाम्रो संगठन पनि निर्माण हुन सकेको थिएन । हामीले पार्टी निर्माण मात्रै गरेका थियौं, नेतृत्व व्यवस्था गर्न सकेका थिएनौं । त्यहीं बीचमा उपनिर्वाचन आयो र हामीले हतारमा निर्वाचनमा भाग लियौं । जनमत पार्टीको चुनावी एजेन्डाहरु जनतामा राम्ररी पस्कन सकेनौं र परिणाम हाम्रो पक्षमा आएन । जेजति परिणाम आए पनि हाम्रो लागि उत्साहजनक थियो । दुई महिना पनि गठन भएको बेला हामी निर्वाचनमा जाँदा जनताले राम्रै मत दिए । अब आगामी निर्वाचनका लागि हाम्रो तयारी भइरहेको छ । वडादेखि संसदीय निर्वाचनसम्मका लागि हामी संगठन निर्माणमा पुगेका छौं । निर्वाचनभन्दा पहिला जनमत पार्टीको कमसेकम १० लाख क्रियाशील सदस्य निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । त्यहीं लक्ष्यअनुसार हाम्रो सदस्यता अभियान तीव्रगतिमा चलिरहेको छ । जनतामा पनि जनमत पार्टीप्रति धेरै आकर्षण र उत्साह हामीले पाइरहेका छौं । युवाहरुमा जनमत पार्टीप्रति एउटा ठूलो आकर्षण छ र विश्वास पनि छ कि संघर्ष गरेर जनताको बीचबाट स्थापित भएको पार्टी हो । मधेशवादकै लागि संघर्ष गरेर स्थापित भएको पार्टीप्रति ठाउँ–ठाउँमा नयाँ युवा पुस्ताहरु प्रवेश गरिरहेका छन् । त्यसैले हामी दृढ संकल्पित छौं कि आगामी निर्वाचनमा प्रदेश २ मा क्लिनस्वीप गर्नेछौं । यो अठोटका साथ जनमतका हरेक कार्यकर्ता अगाडि बढिरहेका छन् ।